Ingxelo entsha yeBarometer yoKhenketho lweHlabathi evela kwelinye iHlabathi?
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba zikaRhulumente » Ingxelo entsha yeBarometer yoKhenketho lweHlabathi evela kwelinye iHlabathi?
IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • inkcubeko • Education • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba Eziphambili zaseHawaii • iindaba • ISpain Iindaba Eziphambili • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • I-WTN
Emva kwesiqingatha sokuqala esibuthathaka sika-2021, ukhenketho lwamazwe ngamazwe luye lwaphinda lwanda ngexesha lasehlotyeni loMntla weIkhweyitha, okonyusa iziphumo kwikota yesithathu yonyaka, ngakumbi eYurophu.
NgeNdibano yeZizwe eziManyeneyo ye-UNWTO eyenzeka kule veki eMadrid, umbutho kanye ngexesha nje ukhuphe i-UNWTO World Tourism Barometer ngoMvulo.
Le UNWTO Barometer iveliswe ngabo bonke abalawuli boMbutho wezoKhenketho weHlabathi ukususela ngo-2003 kwaye ibandakanya uphando ngemeko yecandelo lehlabathi lokuhamba kunye nokhenketho.
Ngophuhliso olutsha olusakhulayo kuhlobo olutsha lwe-COVID Omicron, kunye ne-Afrika eseMazantsi ekwahlukaniswa nehlabathi liphela, kunye neNdibano yeZizwe eziManyeneyo ye-UNWTO ngoku evaliweyo kwabanye, kodwa isaqhubeka ngokuchasene nayo yonke into engathandekiyo, le ngxelo ibonakala ngathi ivela kwenye. ihlabathi.
I-Upturn in Q3 kodwa ukuBuyisa kuhlala kuFragile
Ngokohlelo olutsha lwe-UNWTO World Tourism
IBarometer, abakhenkethi abafika kumazwe ngamazwe (abatyeleli ngobusuku) banyuke nge-58% ngoJulayi-Septemba xa kuthelekiswa nexesha elifanayo 2020. Nangona kunjalo, bahlala 64% ngaphantsi kwamanqanaba 2019. IYurophu irekhode eyona ndlela ibalaseleyo yokusebenza kwesalamane kwikota yesithathu, kunye nokufika kwamanye amazwe ngama-53% phantsi ngexesha elifanayo leenyanga ezintathu ze-2019. Ngo-Agasti noSeptemba ukufika kwaku--63% xa kuthelekiswa no-2019, iziphumo ezilungileyo zenyanga ukususela ekuqaleni kwenyanga. isifo esikho elizweni jikelele.
Phakathi kukaJanuwari noSeptemba, abakhenkethi abafika kwihlabathi jikelele beme kuma-20% xa kuthelekiswa nowama-2020, ukuphucuka okucacileyo kwiinyanga ezintandathu zokuqala zonyaka (-54%). Nangona kunjalo, abafikayo xa bebonke basengama-76% ngaphantsi kwamanqanaba obhubhane kunye nokusebenza okungalinganiyo phakathi kwemimandla yehlabathi. Kweminye imimandla engaphantsi - iYurophu yaseMzantsi kunye neMeditera Yurophu, iCaribbean, uMntla kunye noMbindi Melika - abafikeli ngokwenene banyuke ngaphezu kwamanqanaba angama-2020 kwiinyanga ezilithoba zokuqala zika-2021. IYurophu yeMeditera yabona ukusebenza kwabo okuhle kwi-Q3 2021 ngokwedatha ekhoyo, nabafikayo besondela, okanye ngamanye amaxesha bedlula amanqanaba angaphambi kobhubhane.
Unobhala-Jikelele we-UNWTO uZurab Pololikashvili uthe: “Idatha yekota yesithathu ka-2021 iyakhuthaza. Nangona kunjalo, abafikayo basengama-76% ngaphantsi kwamanqanaba obhubhane kwaye iziphumo kuyo yonke imimandla eyahlukeneyo yehlabathi zihlala zingalingani. ” Ngenxa yamatyala akhulayo kunye nokuvela kwezinto ezintsha ezahlukeneyo, wongeze ukuba "asinakuyeka ukulinda kwaye sidinga ukuqhubeka nemigudu yethu yokuqinisekisa ukufikelela okulinganayo kugonyo, ukulungelelanisa iinkqubo zokuhamba, ukusebenzisa izatifikethi zokugonywa kwedijithali ukwenza lula ukuhamba kunye nokuhamba. qhubeka nokuxhasa eli candelo.”
Ukunyuswa kwemfuno kuqhutywa kukukhula kokuzithemba phakathi kwabahambi phakathi kwenkqubela phambili ekhawulezileyo yogonyo kunye nokucuthwa kwezithintelo zokungena kwiindawo ezininzi ekusingwa kuzo. EYurophu, i Isatifikethi se-EU Digital Covid incede ukuququzelela intshukumo ekhululekileyo ngaphakathi kwiManyano yaseYurophu, ikhulula imfuno enkulu-pent-up emva kweenyanga ezininzi zohambo oluthintelweyo. Abafikeyo babeyi-8% kuphela ngaphantsi kwexesha elifanayo lika-2020 ukanti i-69% ingaphantsi ko-2019. Americas irekhode iziphumo ezinamandla kakhulu ezingenayo ngoJanuwari-Septemba, kunye nokufika kwe-1% xa kuthelekiswa no-2020 kodwa kusengama-65% ngaphantsi kwamanqanaba e-2019. IiCaribbean zirekhode ezona ziphumo zinamandla ngokufika kwe-55% xa kuthelekiswa nexesha elifanayo ngo-2020, nangona i-38% ingaphantsi kuka-2019.
Isantya esicothayo nesingalinganiyo sokuchacha
Ngaphandle kophuculo olubonwe kwikota yesithathu yonyaka, i isantya sokuchacha sisahleli singalingani kwimimandla yehlabathi. Oku kungenxa yemigangatho eyahlukeneyo yezithintelo zokuhamba, amazinga ogonyo kunye nokuzithemba komhambi. Ngelixa iYurophu (-53%) kunye naseMelika (-60%) isonwabele ukuphucuka okunxulumene nekota yesithathu ka-2021, abafikayo e-Asia nasePasifiki behle nge-95% xa kuthelekiswa no-2019 njengoko iindawo ezininzi zokusingwa zahlala zivaliwe kuhambo olungabalulekanga. I-Afrika kunye noMbindi Mpuma zirekhoda i-74% kunye ne-81% yehla ngokulandelelana kwikota yesithathu ka-2021 xa kuthelekiswa no-2019. Phakathi kweendawo ezinkulu, iCroatia (-19%), iMexico (-20%) kunye neTurkey (-35%) ithunyelwe. ezona ziphumo zibalaseleyo ngoJulayi-Septemba 2021, ngokolwazi olukhoyo ngoku.
Ukuphucuka ngokuthe ngcembe kwiirisithi nenkcitho
Idatha kwiirisithi zokhenketho zamazwe ngamazwe zibonisa ukuphucuka okufanayo kwi-Q3 ka-2021. I-Mexico irekhode imivuzo efanayo ne-2019, ngelixa iTurkey (-20%), iFransi (-27%), kunye neJamani (-37%) ithumele ukuhla okuncinci ukusuka ekuqaleni konyaka. Kuhambo oluphumayo, iziphumo bezingcono ngokuphakathi, neFransi neJamani zinike ingxelo -28% kunye ne-33% ngokulandelelanayo kwinkcitho yokhenketho lwamazwe ngamazwe kwikota yesithathu.
Ngaphandle kophuculo lwamva nje, amazinga angalinganiyo okugonya kwihlabathi liphela kunye neentlobo ezintsha ze-Covid-19 zinokuchaphazela ukuchacha okucothayo kunye nobuthathaka. Uxinzelelo lwezoqoqosho olubangelwe ngubhubhane lunokuba nobunzima kwimfuno yokuhamba, yonyuswa kukunyuka kwamaxabiso e-oyile kutsha nje kunye nokuphazamiseka kwamakhonkco obonelelo.
Ngokweenkcukacha zamva nje ze-UNWTO, abakhenkethi abafikayo bamazwe ngamazwe kulindeleke ukuba bahlale bengama-70% ukuya kuma-75% ngaphantsi kwamanqanaba ka-2019 ngo-2021, ukuhla okufanayo nango-2020. Imveliso yangaphakathi yezoKhenketho ethe ngqo inokuphulukana nenye i-2 yeebhiliyoni zeedola zaseMelika, ngokufanayo nangowama-2020, ngelixa ukuthunyelwa kwamanye amazwe kukhenketho kuqikelelwa ukuba kuhlala kwi-700-800 yezigidi zeedola, kakhulu ngaphantsi kwe-1.7 yezigidi zezigidi zeedola ezibhalisiweyo ngo-2019.
Ukuqaliswa kwakhona okukhuselekileyo kokhenketho lwamazwe ngamazwe kuya kuqhubeka kuxhomekeke kakhulu kwimpendulo elungelelanisiweyo phakathi kwamazwe ngokwemiqathango yothintelo lokuhamba, ukhuseleko olulungelelanisiweyo, kunye nemigaqo yococeko, kunye nonxibelelwano olusebenzayo ukunceda ukubuyisela ukuzithemba kwabathengi, ngakumbi ngeli xesha apho iimeko ziya zisanda kweminye imimandla. .